FAA'IIDOOYINKA IYO DHIBAATADA MALAYGA EE CAAFIMAADKA BINI'AADAMKA, OO AY KU JIRAAN JIDHKA HAWEENEYDA: WAXA KU JIRA HALBEEGYADA IYO FITAMIINADA, WAXAY LA MID YIHIIN GURYAHA SI AY UDAJIYAAN, SALAMKA KALOORIGA EE GEEDKA - BEER CAGAARAN
Noocyo: Noocyada ka kooban, faa'iidooyinka iyo waxyeelada caafimaadka aadanaha
Waqti dheer tan malayga waa warshad loo isticmaalo daawada iyo karinta. Dulsaarku waxay u jirtaa maanta. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan u isticmaalin hal ujeedo ama mid kale, waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo oo waxbadan wax laga barto waxtarkeeda faa'iido leh, waxyeelo leh.
Qodobkani waxaan ku sharxi doonaa halabuurka kiimikada ee malayga, faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka jinsi kasta iyo da'da, alaabooyinka leh iskudubka khudaarta cagaaran, isbarbardhig hababka mulkiyada. Iyo sidoo kale waxaan ka hadli doonaa khilaafaadka isticmaalka xidid iyo caadada maalinlaha ah.
Waxyaabaha kiimikada ah: maxay yihiin fitamiinada, imisa kalooriyaal ah iyo waxyaabo kale
Kalorie content: 100 garaam oo badeeco ah oo ku jira 56 kcal.
Vitamiin: waxaa lagu naqshadeeyey fitamiin C. Sidaa darteed, waxaa ku jira in ka badan liin, laakiin ka yar tahay duurjoogta iyo currant madow. Waxa kale oo ku jira nicotinic acid iyo fitamiinada kooxda B.
Micro - iyo macronutrients. Halabuurka ee malayga waa:
saliida muhiimka ah ee muhiimka ah;
Waxa kale oo ku jira carotene, amino acids.
Waxaa soo baxday in halabuurka kiimikada ee khudraddan ay buuxinayaan sifooyin badan oo faa'iido leh. Waxay ka dhigeysaa walxo fiiqan oo lagu magacaabo sinigrin, saliidaha lagama maarmaanka u ah abuuritaanka ur ah dabeecad.
Caawimaad! 100 garaam oo malayga ah ayaa ku jira 3.2 gram oo borotiin ah, 0.4 garaam oo baruur ah iyo 10.5 garaam oo carbohydrates ah.
Qodobbada waxtarka leh iyo waxyeelada leh ee warshadda haweenka, ragga,
Ragga. Horseria waa aphrodisiac dabiici ah, sidaas darteed waxaa loo isticmaalaa in lagu kiciyo rabitaanka galmada, hagaajinta shaqada taranka, dib u soo celinta awoodda. Waxay sidoo kale ka caawisaa hagaajinta wareegga dhiigga ee miskaha, taas oo yareyneysa halista prostatitis.
Si kastaba ha ahaatee, waa inaadan isticmaalin wax badan oo ka mid ah daawadan, sababtoo ah waxaa jira saameyno kale: qufac, jeexjeexin, raaxo la'aan caloosha iyo mindhicirrada.
Maxaa faa'iido u leh haweenka? Maadaama badeecadani ay hagaajineyso dheefshiidka iyo dheef-shiid kiimikaad guud ahaan, waxay ugu horreyntii faa'iido u leedahay haweeneyda sida daaweynta saxda ah, taas oo loo adeegsaday nafaqo, oo abuuraya cunto badan oo ku salaysan malayga. Sida kareemka ah ee la socda qaybaha kale waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo cellulite.
Carruurta. Waa faa'iido ama ma aha carruurta, way adagtahay in laga jawaabo, laakiin ilaa 4 sano waxay ka wanaagsan tahay inaadan siisid warshadan, maadaama ay adeegsanku ka qaybqaadan karto khalkhalka mareenka caloosha. Haddii aysan jirin cuduro la xariira shaqada kelyaha, beerka, caloosha, ka dibna malayga waa la wada cuni karaa qiyaas yar oo difaac wanaagsan leh iyo sida gargaarka lagula dagaalamo hargabka, qufaca iyo boronkiitada.
Intee in leeg ayaad cuni kartaa maalintii?
Celcelis ahaan, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo feeraha aan ka badnayn 10 garaam maalintii. Isla waqtigaas, 10 garaam oo kala duwan waa in loo qaybiyaa dhowr cunto. Waa lagama maarmaan in la raaco xeerka, maaddaama isticmaalka xad-dhaafka ah uu keeni karo qallayl, lallabo iyo cawaaqib kale.
Maaddaama ay jiraan cuntooyin badan oo leh malayga si loogu daaweeyo cudurrada ayadoo la cunayo, iyo sidoo kale in wax soo saaridda ee cadaadiska, waa lagama maarmaan in si adag loo raaco isticmaalka isticmaalka, taas oo ay ku dhajiyeen. Haddii kale, waxaad beddeli kartaa dhibaatooyin caafimaad oo dheeraad ah.
Qodobo waxtar leh, waxyeelo waxyeelo leh caleemaha iyo xididka caafimaadka dadka, cuntada sida caadiga ah
Leaves waxaa lagu hodansiiyey fitamiino badan., oo leh saameyn ku leh difaaca jirka bani'aadamka, isagoo ah antioxidant iyo antibiyootig, sababtoo ah maadada phytoncides. Marka la eego, qaybtan waxaa badanaa loo isticmaalaa sida tinctures iyo cadaadinta daaweynta:
Sidaas, tincture waxaa loo isticmaali karaa isticmaalka dibadda si loo yareeyo xanuunka, iyo in lagu daboolo gudaha.
Tincture waxaa laga heli karaa sida soo socota:
Ku shub vodka, ka tag toddobaad.
Ka dibna adkee oo diyaar u ah inuu cuno.
Waxaad sidoo kale ku dari kartaa liin.
Marka la eego cadaadiska, caleemaha waxaa lagu buufin karaa biyo karkaraya waxayna codsadeen qaybta xanuunka ee dhabarka. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in ay ka madaxbannaan madax xanuun. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad ku dhejiso dhismayaasha ilaa toban daqiiqo.
Caleemaha waa jawi wanaagsan oo loogu talagalay qajaarka iyo yaanyada.. Marka la eego saameynteeda bakteeriyada, waxaa lagu dari karaa ilaalinta si loo ilaaliyo alaabada.
Iyada oo la socoto fursaddan wanaagsan, kama qayb geli kartid isticmaalka caleenta malayga, maaddaama ay u horseedi karaan carqaladeyn ku jirta shaqada habdhiska dheef-shiidka. Saliida qallalan, haddii loo isticmaalo si aan habooneyn oo badanaa, waxay keeni kartaa gubasho maqaarka iyo gangrene.
Si ka duwan caleemaha, xididka malayga waa xitaa waxtar badan.. Sidaa darteed, waxaa ku jira:
Iyadoo leh habdhaqan noocaas ah iyo codsi ballaaran. Sida looska loo isticmaalo si loo nadiifiyo nabarrada, abrasions, jarista. Foomka suuxinta, waxaa loo isticmaalaa mashiinka garbaha leh ee leh hypothermia, laabotooyinka iyo xanuunka dhabarka. Oo samaynta tincture ah biyo ayaa loo isticmaalaa si looga takhaluso dhibco da '.
Digniin! Si aad u isticmaasho sifooyinka wanaagsan ee khudradda, waa in la cunaa qaab cusub oo diyaarsan oo aan lagu kaydin tinctures muddo ka badan 10 maalmood.
Haddii qofku aanu garanaynin cuduradiisa, cun cun cun rooter ah wuxuu yeelan karaa cawaaqib xun. Sidaas awgeed, waa muhiim in la ogaado astaamaha calooshaada. Marka la kordhiyo, waa in aadan isticmaalin khudraddan, maadaama ay u baahan tahay korodh xitaa ka badan acidity.
Waxay soo baxaysaa in caleemaha iyo xididka malayga waxay la mid yihiin qayb ka mid ah macdanta iyo fitamiinadalaakiin waxay ku kala duwan yihiin tirada. Rootiga iyaga ka mid ah ayaa ka badan.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad daawato fiidiyoowga diyaarinta tincture ee caleemaha malayga:
Waa maxay faa'iido badan: iniin khardal ah ama malayga miiska? Way adag tahay in laga jawaabo, sababtoo ah guryaha, labadaba waa isku mid. Waxay ka tirsan yihiin reerka kaabajka ah waxayna ku jiraan walxo isku mid ah, tusaale ahaan, saliid muhiim ah, sodium, potassium. Labada dhirta waxay leeyihiin saameyn wanaagsan oo ku saabsan dheef-shiid kiimikaad, waxaa loo isticmaalaa kululaynta, xiirashada, iyo sidoo kale daaweynta SARS.
Labada mustard iyo malayga waxay leeyihiin waxyeelo antimicrobial iyo anti-bararka.. Maaddaama ay saameyneyso kuleylka, isticmaalka xad-dhaafku wuxuu keenaa gubasho, labadaba isticmaalka dibadda iyo gudaha.
Dhirta Kuwani waxay leeyihiin codsiyo isku mid ah oo ku saabsan daawada, qurxinta iyo karinta. Sidoo kale xayiraado isku mid ah. Sidaa darteed, waa suurtagal in la bixiyo jawaab qeexan, taas oo faa'iido badan leh. Arrin doorasho ah oo ku saabsan doorashooyinka shakhsi ahaaneed.
Waxyaabaha dhirta lagu daray
Mid ka mid ah alaabooyinkani waa mashiinka mashiinka. Tan iyo markii uu korontadu waxay ku jirtaa wakhti gaaban iyo waxa fiican in la isticmaalo sida ugu dhakhsaha badan ee loo kariyo, ka dibna miraayad miiska, oo lagu iibiyo dukaamada, si khaas ah u lumiya dhammaan guryahaas waxaana loo isticmaali karaa oo keliya in lagu hagaajiyo dhadhanka suxuunta.
Sidaa darteed, si loo helo miisaska miiska si ay u noqoto mid wax ku ool ah jirka bini'aadamka, waxaa fiican inaad karsato adiga oo ka iibsanaya dukaanka oo u adeegso oo kaliya sida wax lagu daro. Laakinse hubso inaadan xumeyn oo aadan ka warqabin xaddidaadiisa, si aadan u waxyeeleynin jirkaaga.
Maxaa kale ee miisaanka gubanaya ee miisaanka jirka bini'aadamka? Sidoo kale isaga si fiican u tagaa malab iyo isdhexgalka dhammaan qeybaha faa'iidada leh ee labadaba waxay ka dhigayaan mid waxtar u leh daaweynta:
Si kastaba ha ahaatee, tani waa isdhexgal gaar ah, waana in si taxadar leh loo adeegsadaa, isagoo baranaya sawirkaaga gudaha ee si fiican, sidaa daraadeed ma jiraan xayiraad. Haddii kale, faa'iidooyinka oo dhan waxay noqon doonaan waxyeello.
Horseria ama malayga waa badeecad kale oo laga sameeyey malayga iyo waa jawi aad u kulul. Inta badan, hrenoder laga sameeyey rooteradish xidid, toonta iyo yaanyada. Dhammaan alaabooyinka ayaa lagu xayeysiiyaa iyada oo Booqday Furimaha Dagaalka hilibka, milix iyo basbaas lagu daro.
Iyada oo ku xiran tahay tirada yaanyada, xajmiga xayawaanka ayaa sidoo kale isbeddela. Inta badan, way yar tahay. Iyo malayga ka badan, ka weyn nolosha rafaadka. Daawooyinka yaryar, xawaashkaani waa mid aad u faa'iido leh, maadaama ay ka caawiso xoojinta nidaamka difaaca, metabolism wanaagsan. Laakiin, waxaa jira tiro xaddidaad ah isticmaalka.
Inkastoo dhammaan faa'iidooyinka cunidda malayga macdantu waxay noqon kartaa mid waxyeello leh, sidaas darteed waxa ay leedahay khilaafka soo socda:
Cudurada mareenka caloosha iyo mindhicirrada, sida boogaha caloosha iyo boogaha duodenal, gastritis leh qandho sare leh.
In cudurada kelyaha iyo beerka.
Uurka, iyo sidoo kale haweenka quudinta.
Carruurta ilaa 4 sano.
Waa muhiim! Markaad isticmaashid fareebka dadka uurka leh, waxaa jiri kara cawaaqib culus. Sidaas awgeed, qaab khafiif ah ee cudurka ayaa ku noqon kara mid daran. Dadka aan lahayn khilaafka isticmaalka badeecadani waxay sidoo kale u baahan tahay in ay u hoggaansamaan qiyaasta, si aanay u waxyeeleynin jirkaaga.
Horseria waa dhir khaas ah oo isku dhafan falal fara badan oo waxtar leh hal mar. Iyada oo adeegsigeeda habboon iyo isticmaalka waxay gacan ka geysaneysaa xoojinta jidhka oo dhan. Laakiin, haddii lagu xadgudbo, waxay u keeni kartaa waxyeelo weyn caafimaadka, taas oo markaa ay adkaan doonto in la bogsado.